Fashion Style ဘယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ထင်သလဲ? အပိုင်း(၂) – YANGON STYLE
Fashion Style ဘယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ထင်သလဲ? အပိုင်း(၂)
ထသွားထလာ ဝတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတဲ့ ဖက်ရှင်စတိုင်တစ်မျိုးပေါ့။ ပြီးတော့ ချစ်စရာလည်းကောင်းတဲ့ပုံစံလည်း ဖြစ်နေပြန်ရော။ အပေါ်က တီရှပ်တစ်ထည်နဲ့ အောက်က ဂျင်းဘောင်ဘီနဲ့ ဝတ်လိုက်ရင်ကိုက ပြည့်စုံနေပြီး။
ဒီ စတိုင်ကတော့ ပြောစရာမလိုအောင် ကြားဖူးပြီးသား စတိုင်တစ်မျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ခန္ဒာကိုယ်အသားပေးဖော်ပြတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။ ပုရိသတွေကို ရင်ဖိုစေတဲ့ စတိုင်ပေါ့။ အများအားဖြင့် ဒေါက်ဖိနပ်ရယ် စကတ်အတိုကျပ်ကျပ်ရယ်နဲ့ ရင်သားကိုလှစ်ဟပြထားတဲ့ စတိုင်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
တစ်စုံတစ်ယောက်က သေသေချာချာဆင်ပေးတဲ့ စတိုင်မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဝတ်ချင်တဲ့ စတိုင်ကို ကိုယ့်ဟာကို အဆင်ပြေသလို အိုင်ဒီယာ အသစ်အဆန်းထွင်ပြီး ဝတ်တဲ့ စတိုင်ပေါ့။
နောက်အပတ်တွေမှာလည်း ထပ်တင်ပေးသွားဦးမှာမို့လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှူနိုင်ပါတယ်နော်။
By : Myat Noe